सलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई लिएर मजाक उडाए पछि …. – Kavrepati
Home / अन्तरास्ट्रिय / सलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई लिएर मजाक उडाए पछि ….
सलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई लिएर मजाक उडाए पछि ….
admin September 4, 2021	अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 544 Views
अहिले विश्वभर भाइरल भएको यो तस्विर जस्ले आफैँ ठूलो खतरामा परिरहँदा पनि यसले आमाको साथ छाडेन (५ तस्विर सहित)
एजेन्सी । कहिले काँही सामान्य मानेर गरिएको कुराले अप्ठेरो पार्न सक्छ । कसै ाई खुसी बनाउन गरिएको मजाक वास्तविक बनिदिँदा आलोचना सहनु पर्छ । अहिले बलिउड अभिनेता सलमान खानको त्यस्तै आलोचना भइरहेको छ । उनले भर्खरै दिवंगत भएका बलिउड अभिनेता शिद्धार्थ शुक्लासंग मृत्युको विषयमा मजाक गरेका थिए । उनको त्यो पुरानो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै सलमानको आलोचना भएको छ ।
रियालिटी शो बिग बोस सिजन–१३ मा सहभागी भएका थिए शिद्धार्थ शुक्ला । त्यसको होष्ट रेहका सलमान खानले शिद्धार्थ विरामी भएर अस्पताल भर्ना गरेको बेलामा मजाक गर्दै बोलेको शब्द अहिले उनैलाई आलोचना गर्ने माध्यम बनेको छ । उनले मजाक गर्दै भनेका थिए, ‘उनका फ्यानहरुले उनलाई बचाए तर भगवानले बचाइरहेको छैन । सबैले रुँदै भन्नेछन्, असल मान्छे थियो ।’
शिद्धार्थ बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको बेलामा सलमानले मजाक गर्दै यस्तो भनेका थिए । उनलाई बिग बोस–१३ मा टाइफाइड भएको थियो । उनलाई बिग बोसको घरबाट निकालेर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । हप्ताको वारमा सलमानले भिडियो कल गर्दै सिद्धार्थसँग कुराकानी गरेका थिए । यस्तैमा मजाक गर्दै सलमानले सिद्धार्थको मृत्युको मजाक भएको थियो ।
सो भिडियो शेयर गर्दै फ्यानहरुले सलमानको आलोचना गरेका छन् । विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियासँगै उक्त भिडियो सेयर भइरहेको छ । कतिपयले मृत्युलाई लिएर गरिएको मजाक सही नभएको पनि बताएका छन् ।
बिहीबार हृ’दयघा’तका कारण सिद्धार्थको मृत्यु भएको छ । अप्रत्याशित रुपमा भएको उनको निधनले परिवार त शोकमा छ नै बलिउड क्षेत्रनै शोकमा डु’बेको छ । उनको शुक्रबार मुम्बईको ओशिवारास्थित श्मशान घाटमा ब्रह्मकुमारी रीति रिवाजकासाथ अन्तिम स.स्कार गरिएको छ ।
Previous अन्तिम सम्म बचाऊ…बचाऊ… भन्दै थिए तर छोडेन कालले, यस्तो छ त्यो रात प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिको बयान , हेर्नुहोस
Next दैलेखमा १९ वर्षीया किशोरी बनिन् कांग्रेसको सभापति
राजधानीमा ताइपेईमा शक्तिशाली भूकम्प कम्पनको महसूस
आइतबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । त्यहाँका बासिन्दाहरुले उत्तरपूर्वी ताइवानमा राजधानी ताइपेईमा ठूलो कम्पनको महसूस …